Expressing Myself: July 2013
घडीले बिहानको ६ बजाउँदा नै लल्लुले स्वास्नीलाई होटलबाट पिकअप गर्न हतारिन्छ । जुरुक्क उठ्छ । र्‍याल लतपतिएको अनुहार नाडीले सर्लक्क पुछ्छ । एक मुठी पानीले अनुहार र कपाल भिजाउँछ । ऐना हेर्छ । मिथ्थुनजस्तो देखिएँ कि देखिइनँ जान्न खोजेको हुँदो हो ! बरण्डामा राखेको नयाँ साइकल हतारिंदै झिक्छ । साइकल नयाँ छ नि, त्यसैले धुलो पुछेर टल्काउन भुल्दैन । अनि बाटाभरि अनेक सोंच्दै स्वास्नी लिन ‘बिन्दास लज’ पुग्छ । हप्ताको तीन वा चार दिन लल्लुले गर्ने चर्या हो यो ।
लज नजिकैको ‘बम्मै साइकल हस्पिटल’ मा थाकेको आफ्नै शरीर जबरजस्ती बोकेर सीताले कुरीरहेकी छ । परैबाट लल्लुले बजाएको सुसेली सुन्छे उसले । अनि गह्रुङ्गो भएको आफ्नो जिउलाई पैतालाको सहारामा छोडेर उभिन्छे । पाकेका केरा जस्ता पहेँला दाँत देखाएर लल्लु हाँस्छ । अनि ओठ चुच्च्याएर साइकलको क्यारिअरतिर इसारा गर्छ । सीताले दुवै खुट्टा एकापट्टी राखेर साइकल क्यारिअरमा आफ्ना पुठ्ठा राखिदिन्छे । नयाँ साइकल चुइँ–चुइँ गर्दै कुद्‍न थाल्छ । लल्लुले साइकल बेतोड कुदाउँदैन, किनकि उसमा एउटा उत्सुकता हुन्छ । उसलाई लिन आउँदा आफ्नो पोइले गर्ने पहिलो प्रश्न कुन हो सीतालाई थाहा छ ।
“हिजो शुक्रबार ! ए बुढी कति आम्दानी भो त ?” कुन्नी कुन हिन्दी गीतको धुन सुसेल्दै लल्लुले साइकलको प्याडल खुब रहरलाग्दो तरिकाले घुमाउँदै सोध्छ ।
बाटामा भेटिएका मान्छेहरूलाई ‘राम राम हजुर !’ भन्न छुटाउँदैन ।
गुलाफी कलरको सारी लगाएकी स्वास्नीको मलिन अनुहारमा बिहानको उराठलाग्दो घाम ठोक्किएको छ । लल्लुको ढाडमा टाउको अड्याएर बसेकी सीता आज निश्लोट थाकेकी छ । त्यसैले बोल्ने जाँगर पनि छैन उसमा, जति आम्दानीबारे जान्ने जाँगर लल्लुमा थियो ।
“आज बहुत् खटिस् के रे बुढीया ?” गालामा चिमोटिदिन्छ लल्लुले ।
कालो नङपालीस पोतेको लामो नङले पोइको कम्मरमा घोचिदिन सीतालाई पनि मन लागेको थियो । तर उसँग जाँगर भए पो !
“पैँतालिस सौ !”
मलिन स्वरमा उत्तर दिन्छे उसले ।
कमाउन आउँदाका दिन उस्तै उस्तै आउने संख्यात्मक उत्तर आज भने चीनको अर्थतन्त्रजस्तै सर्लक्कै उकालो लागेको थियो !
साइकल झ्याप्प रोकेर बुढीलाई हेरेर हाँस्छ ।
“उम्ममममममम......!!!!” हिस्सि परेकी स्वास्नीको गालामा म्वाइ खाइदिन्छ, “कट्रिनाजस्ती मेरी बुढीया ! कमालै गरिस् रे ! अनि कस्तो मान्छे आएको थियो आज ?”
“तीनजना थिए, विद्यार्थीजस्ता देखिने ।” लामो हाइ काढ्दै निद्रालु आवाजमा सीताले उत्तर फर्काउँछे ।
परबाट एलडिओ साब लखरलखर हिंड्दै आइरहेको देखेर लल्लु टाढैबाट, चिच्याउँछ, “सर ! जय राम जि कि !”
अनि नजिकै पुगेर साइकल घ्याच्च रोक्छ । सीता लल्लुतिर हुत्तिन्छे, उसका छाती लल्लुका ढाडतिर स्वात्तै बढ्छन्...
(लेख्दै गरेको उपन्यासको छोटो अंश...)
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 4:53 PM